मुख्य मन्त्री राईमाथी बालिकाको आ”क्रमण ब’लत्का’री भन्दै त’थानाम!:: Mero Desh
मुख्य मन्त्री राईमाथी बालिकाको आ”क्रमण ब’लत्का’री भन्दै त’थानाम!
Published on: ९ बैशाख २०७८, बिहीबार १२:५५
बालिका चिच्याइरहिन् ।उनले रा’ईमाथि अनमेल विवाह गरेको भन्दै चिच्याइ रहिन् बालिकाले आ”रोप लगाउँदै चिच्याइरहँदा एमाले नेतृ राधा ज्ञ’वालीलगायत हेरिरहेका थिए। केही पुरुषले भने बालिकालाई पागल भनिरहेको सुनिन्थ्यो ।बा’लिका खड्काले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध यौ’न दु’व्यर्वहारको आरोप लगाउँदै आएकी छिन् ।
खड्कालाई पार्टी का’र्यालय परिसरबाट प’क्राउ गरिएको म”हानगरीय प्र’हरी परिसर का’ठमाडौंले जनाएको छ।”र खड्का लाई अहिले सिं’हदरबार वृत्तमा राखिए को छ । मुख्यमन्त्री राई र खड्काबीच लामो समयदेखि विवाद छ। खड्काले राईलाई यौ’न शो’षण गरेको आ’रो’प लगाउँदै आएकी थिइन्।
नेकपा एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष नारायण खतिवडा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर हुन्।६५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीमा ४५ जना माधव नेपालको पक्षमा छन्। नुवाकोट मा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओली समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ।ओली पक्षले बद्री मैना लीलाई अध्यक्ष बनाएको छ।
मैनाली २०७५ जेठ २ अघि जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष थिए।विवाद भए पनि पार्टी कार्यालय दुवै पक्षले प्र’योग गरेका थियौं। तर अहिले भने शक्तिको आडमा हामीलाई निकाल्न खोजिएको थियो ,एमाले नुवाकोटकी सदस्य उनै उषाकिरण तिम्सिनाले सेतोपाटीसँग भनिन् प्रहरीले तपाईं हरू यहाँ बाट जानुस् भनिरहेको छ। हामीले आवश्यक परेमा प्रति कार गर्ने तर बैठकस्थल नछोड्ने भनिरहेका छौं !